Qaylada digaagga, ciyaarta digaagga ee codkaaga lagu xakameeyo ee ku garaacaysa Android | Androidsis
Markan waxaan kuu keenay qoraal xoogaa ka duwan, waana taas, in kasta oo aan kuu keenayo qoraal fiidiyoow ah oo ka hadlaya a ciyaarta android, tani wax xiriir ah kuma lahan ciyaaraha aan u baranay inaan ku ciyaarno nidaamka cagaaran ee hawlgalka Android. Farqiga ciyaartaani waa mid aad u badan sida ay ciyaartiisu u khuseyso, oo ay ku leedahay buunbuunin la yaab leh shabakadaha bulshada ee kala duwan iyo warbaahinta takhasuska leh ee adduunka Android.
Ciyaarta ayaa loo yaqaan Chicken siidaynay waxaana loogu caanbaxay ciyaarta digaagga ee codka lagu xakameeyo. Ciyaar ka mid ah qaabka ugu nadiifsan ee caadiga ah, oo leh farqiga weyn ee loo ciyaaro iyada oo aan gacmo lahayn iyo isticmaalka kaliya ee codkeena si loogu maareeyo digaagga saaxiibtinimo
Digaagga DigaaggaSidee ayey noqon kartaa haddii kale, waxaan kala soo dagsan karnaa si toos ah oo bilaash ah Google Play Store, oo ah dukaanka rasmiga ah ee loogu talagalay Android. Khasaaraha kaliya ee aan awooday inaan ka baxo ciyaartan ayaa ah in, haddii ay jirto wax gaar ah ay tahay Gabi ahaanba way ka duwan tahay ciyaaraha kale ee madal loogu talagalay Android, ayaa ah in la tiriyo, dhadhankeyga iyadoo aan si xad dhaaf ah u faafinayo oo si xun korka loogu taagay.
Ka saarista tan ka soo qaadista aniga ahaan aniga aad ayey muhiim u tahay tan iyo markii ay naga horjoogsaneyso waxyaabo badan oo ku saabsan khibrada isticmaalaha ciyaarta, runta ayaa ah Qaylada digaagga waa ciyaar aad iyo aad u xiiso badan oo loogu talagalay Android In kasta oo aanu ku habboonayn in lagu dhex ciyaaro bulshada dhexdeeda, markaa waxaan kuu sheegayaa in aanay ahayn wax ka badan habka loo xakameeyo digaagga fiican iyadoo la adeegsanayo codkeenna.
Farqiga weyn ee qaylada digaagga wuxuu kujiraa gameplay-keeda, sifiican wax kabadan ciyaarteeda taas oo ah wax aan ka badneyn barta casriga ah ee loogu talagalay Android, faraqa weyn ee ay kujirto habka aan u xakameyn doonno dabeecadda ciyaarta fiidiyowga.
Si aan uga gudubno digaagga heerarka kala duwan iyo adduunyada lagu soo daray ciyaarta gebi ahaanba bilaash, waa inaan macno ahaan u yeelanno qosol, u gabyi, ama kaliya u sheeg ilmahaSidan oo kale, digaagu wuxuu ku hormari doonaa isagoo ku dhex maraya heerka u dhigma qaab aad u la mid ah markuu socdo.
In laga boodo ama laga gudbo caqabadaha kala duwan ka soo baxa jidka, waa inaanu kor u qaad codka aan ku xakameyneyno digaaggaHaddii aan la hadlayno isaga waa inaan si sare uhadalnaa oo haddii aan kufaanayno ama u heesayno waa inaan si aad ah uga sarreynaa si digaagdu ay noo adeecdo una booddo caqabadda u dhiganta, buurta, iwm.
Way fududahay laakiin isla markaa baashaalku waa habka loola falgalo tan cusub Ciyaarta Android ee maalmihii la soo dhaafay ay ku garaaceysay shabakadaha bulshada ee kala duwan.
Kala soo bax Qaylo Digaag bilaash Google Play Store
Developer: Cayaaraha Cayaaraha
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Qaylada digaagga, ciyaarta digaagga ee lagu xakameeyo codkaaga oo ku garaacaya Android
Spotify wuxuu ku darayaa "Behind The Lyrics" qaybta barnaamijkeeda Android